Mnangagwa to address Zimbabweans in SA in bid to rebuild Zim economy
Zimbabwe's 'Herald' newspaper says the president will meet with Zimbabwean business people living in South Africa and others on Thursday.
FILE: New interim Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa looks on after he was officially sworn-in during a ceremony in Harare on 24 November 2017. Picture: AFP
Eyewitness News | 1660 days ago
JOHANNESBURG - Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa is expected to address a business conference in Pretoria as his government begins efforts to dig the country out of economic ruin.
Zimbabwe's Herald newspaper says the president will meet with Zimbabwean business people living in South Africa and others on Thursday.
Mnangagwa replaced long-time leader Robert Mugabe last month following so-called "military intervention" that forced Mugabe out of office.
The president laid out a grand vision recently to revitalise Zimbabwe’s ravaged economy and vowed to rule on behalf of all the country’s citizens.